Mihetsika Amin’ny Fanairana Fanafihan’ny Vitsika Mena Misy Poizina I Japana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Aogositra 2017 17:03 GMT
Fanazavana: Vitsika mena hita tao Honmokufuto ( seranan-tsambo misy kaontenera ao Yokohama, Japana); Manomboka ny fanadihadiana mikasika ny vitsika mena manerantany, izay ho atao any amin'ny seranan-tsambo miisa 68 manerana an'i Japana. Pikantsary tao amin'ny ANN fantsona YouTube ofisialy.
Nandefa fanentanana ny manampahefana Japoney mba hitadiavana, hanaovana vela-pandrika sy handringana ny vitsika mena tsy tompotany ao amin'ny toerana miisa 68 manerana ny firenena taorian'ny nahitana ilay bibikely teo akaikin'ny seranan-tsambon'ny kaontenera maro tany amin'ny faritra maro tao Japana.
Nanomboka ny fihazana vitsika mena ( Solenopsis invicta , fantatra ihany koa amin'ny teny anglisy hoe red imported fire ant, na RIFA ) izay tsy tompotany fa avy any Amerika Atsimo rehefa hita tao amin'ny seranan'ny kaontenera tao Kobe ireo vitsika tamin'ny volana Jona 2017 .
Sioka: Hatrany amin'ny seranan-tsambo miisa 68 manerana an'i Japana ny fihazana ny vitsika mena.
Fanazavana lahatsoratra : Natomboka tao amin'ny seranan-tsambo ny asa fikarohana raha mbola hita tao amin'ny seranan-tsambo manerana an'i Japana ny vitsika mena misy poizina.
Tsy mbola nahitana vitsika mena mihitsy tao Japana teo aloha. Nahazo laza ilay bibikely tompotany any Amerika Atsimo taorian'ny nanjanahany ny faritra saika manerana ny atsimon'i Etazonia. Afaka mivelona sy miroborobo amin'ny tontolo iainana rehetra ity vitsika ity, ary malaza noho ny kaikiny tena maharary, ary lehibe ny fahafahany mameno ny toerana ho an'ny daholobe ao Japana toy ny zaridaina sy ny kianja filalaovana, sady manimba ny voly hatrany izy ireo .
Tamin'ny 5 Jolay , hita tao amin'ny seranan-tsambon'ny kaontenera tao Osaka, any atsinanan'i Kobe ireo vitsika mena, sambany tao anatin'izany ny renivitsika (mpanjakany). Avy eo hita tany Nagoya, seranan-tsambo lehibe iray hafa ho an'ny kaontenera any amorontsiraky ny Pasifika ao Japana, ireo vitsika mena ary tamin'ny 11 Jolay, hita tany afovoan-tany tany Kasugai, tanàndehiben'ny indostria akaikin'i Nagoya ireo vitsika mena, izay manodidina ny fitobian'ny kaontenera .
Nandritra izany fotoana izany, vitsika am-polony heverina fa vitsika mena no hita ary naringana tao an-tanàndehiben'i Nagaoka any Niigata, any amoron-dranomasin'i Japana. Na dia tsy voamarina aza izany fa tena vitsika mena tokoa dia voalaza fa hita tao anaty baoritra nalefa sambo avy any Filipina ho any amin'ny seranan-tsambon'i Tokyo Oi Pier ireo bibikely tao Nagaoka ary avy eo voatondra an-tanety ho any Nagaoka .
Tamin'ny faran'ny volana Jolay, tsy mahagaga raha toa ka hita tao amin'ireo tranoben'ny seranan-tsambo ao Yokohama ireo vitsika mena, miala kely ivelan'i Tokyo izany, sy tany amin'ny toerana roa ao Kyushu, any amin'ny faritra andrefan'i Japana ihany koa.
Nisy vitsika hita tao amin'ny kaontenera fandefasana entana tany amin'ny toerana samihafa manerana an'i Japana, raha nisy vitsika hafa ihany koa hita tety an-tanety niseho teo amin'ny godorao triatra tao amin'ny tranoben'ny seranan-tsambo .
(#Yokohama Shimbun), nanambara drafitra maika tamin'ny fikambanan'ny gazety mba hanakatonana ny tany rehetra ao amin'ny seranan-tsambo [tratran'ny fianahana] ny Minisiteran'ny Fitaterana rehefa hita tao amin'ny tobin'ny kaontenera ao Honmokufuto any amin'ny Serana-tsambon'i Yokohama ireo “vitsika mena” misy poizina avy any Amerika Atsimo .
Hita tao amin'ny kaontenera fandefasana entana izay fantatra fa niainga avy any Shina hatrany, izay efa nozanahan'ny vitsika mena ihany koa fara fahakeliny nanomboka tamin'ny taona 2005, no nahitana ireo vitsika mena vaovao tamin'ny volana Jolay. Vokatr'izany, nanome baiko mba handraisana fepetra handringanana ireo vitsika mena any amin'ny seranan-tsambo maherin'ny 60 izay mahatonga entana tsy tapaka avy any Shina ny Minisiteran'ny Fitaterana ao Japana. Niantso ny fandraisana fepetra mitovy amin'izany ihany koa ny minisitera tany amin'ny seranan-tsambo misa 870 hafa raha toa ka mandray kaontenera mpitondra entana avy any Shina izy ireo.
Mandritra izany fotoana izany, tafiditra anatin'ny lasa anisan'ny ampahany kely tamin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra 2017 tao Japana ihany koa ny vitsika mena noho ny vaovao mivantana tsy tapaka avy amin'ny tati-baovao nandritra ny volana Jona sy Jolay. Ohatra, nanamarika ny mpisera Twitter iray fa nipoitra tao amin'ny Fetibe Aomori Nebuta, hetsika lehibe atao amin'ny fahavaratra any amin'ny faritra avaratr'i Japana izay manasongadina ny taratasy goavana mitsingevana, ny vitsika mena:
Misy vitsika mena ihany koa aty.